Huwandu hweVanhu Vafa neCovid-19 Hwowedzera
Nyamavhuvhu 23, 2020
Bazi rezvehutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vave zana nemakumi mashanu nevshanu kana kuti 155 mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa mudunhu reManicaland nemusi weSvondo.
Dunhu reHarare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi masere nevatatu kana kuti 83, richiteverwa neBulawayo yave nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29.
Dunhu reManicaland ndiro riri pachidanho chechitatu nevanhu gumi nevapfumbamwe kana kuti 19.
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose vasvika zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu kana kuti 5, 930, vapora vachisvika zviuru zvina nemazana masere ane makumi manomwe nemaviri kana kuti 4,872.
Vanhu vari kurwara mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 mushure mekunge vamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243 vapora . Vanhu makumi matatu nevanomwe kana kuti 37 vakabatwa nechirwere ichi nemusi weSvondo uye vanhu vose ava vakachitapurirwa munyika sezvo vasina nhoroondo yekuenda kunze kwenyika.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health, VaItai Rusike vanoti zvakakosha kuti vanhu varambe vachitvedzera zviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezvehutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi masere kana kuti 1,180 million.
Vabatwa nechirwere ichi muAfrica, vanhu vafa vasvika zviuru makumi maviri nemazana matanhatu zvine gumi kana kuti 27, 610, vapora vadarika zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 900.000 .
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu ane zviuru mazana matatu kana kuti 23, 3 million.
Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana ne makumi manomwe nematanhatu kana kuti 176, 000. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana masere nematanhatu kana kuti 806, 000.
Vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni gumi nemashanu kuti 15 million